Nlekọta ụlọ dijitalụ: Otu esi azụta ihe onwunwe Post-COVID maka nlọghachi kwesịrị ekwesị | Martech Zone
Dị ka a tụrụ anya, ohere na ahịa post-COVID agbanweela. Ruo ugbu a ọ dị ka o doro anya na ọ gbanwere maka ndị nwe ụlọ na ndị na-etinye ego na ụlọ. Dika ichoro ka odi nwa oge na ulo ndi ozo di iche-iche n’aga n’iru, onye obula nwere adreesi — ma obu ulo ezumike zuru oke ma obu nani ulo ozo - ka edoziri nke oma n’udi a. Mgbe ọ na-abịa mkpụmkpụ-okwu mgbazinye ina, e nwere ihe fọrọ nke nta ka ọgwụgwụ na anya.
Ọzọkwa, ọ dịghị ọkọnọ na anya. Onye isi nke Airbnb, Brian Chesky, ekwupụtala na Olee ihe enyemaka 1 nde ụsụụ ndị agha ọ ga-adị mkpa iji mezuo ahịa ahịa. Nke a bụ eziokwu ọkachasị na ngwongwo multifamily, ụdị 65% nke akụ nke Airbnb bụ nke ya. Flọ nke nwere ọtụtụ ụlọ nwere ibo ụzọ 40 ma ọ bụ obere hụla ụfọdụ n'ime ezigbo nloghachi.
Obere ihe egwu na ugwo di elu na echere ndi nwe ulo obula, ma o bu ulo, aka oru ma obu oke ahia. Ma na nke ọ bụla, data, ahịa, na akpaaka bụ ezigbo enyi nke onye nwe ya. Usoro ịzụ ahịa ochie ga-efunahụ mgbanwe ndị a na-achọ, na enweghị ike ịgbanye usoro ntụgharị ntụgharị ọrụ na-arụsi ọrụ ike-ọkachasị site na mgbazinye oge dị mkpirikpi-nwere ike ịme ego ụlọ na-aga ndịda. Site na nhazi nke ọma, nkwadebe, yana itinye ego ole na ole, ndị nwe ụlọ nwere ike inwe obi ike na ha etinyela mgbazinye ha nke ọma maka ọganiihu post-COVID.
Footkwụ Kachasị Mma N'iru
COVID-19 bụ nsogbu zuru ụwa ọnụ; ọ bụ mmetụta na ntụgharị uche nke ụwa niile. Nke ahụ pụtara na ọtụtụ ndị ọbịa post-COVID na-achọ otu ihe ahụ, nnukwu usoro mbụ maka onye ọbịa ọ bụla ga-ejide n'aka na ihe ndị ahụ dị n'usoro. Ndepụta kwesịrị ịkpọsa usoro nchekwa nhicha dị elu n'etiti ndị ọbịa, yana usoro ntinye aka n'ime ọnụnọ ndị ọbịa. Ndị ọbịa na-ahọrọ usoro nhicha ise nke Airbnb na-enweta akara ngosi pụrụ iche na ndepụta ha, nke gosipụtara ọchịchọ n'etiti ndị na-agbazite inwe ụdị ngosi ahụ. Keeplọ nlekọta ụlọ na-abụbu ihe na-aga n'azụ ihe nkiri; ugbu a, ọbịa chọrọ ịhụ ahụ ike na nchekwa ngwọta iji kwere na a ihe onwunwe nchekwa.
Ndị nwe obodo kwesịrị iburu n'uche ihe eji arụ ọrụ site n'ụlọ mgbe ha na-akpọsa ndepụta ha. Ruo ọnwa ole na ole, ịntanetị ikuku bụ otu n'ime ihe ndị kachasị achọ n'etiti ndị njem. Airbnb weputara nyocha nke gosipụtara usu ndị na-agbakwunye laptọọpụ ọrụ enyi na enyi na-enweta 14% karịa ndị ibe ha. Foto ndị dị elu nke ebe sara mbara - ma eleghị anya kọfị na-arụkọ ọrụ ọnụ, onye nbipute, ike Internetntanetị na-agba ọsọ ọsọ-ga-adọta otu n'ime ọnụ ọgụgụ ndị bara uru nke oge COVID: ọrụ-site na ebe ọ bụla na-akwụ ụgwọ.
Ndepụta oge niile - Ihe kariri
Mgbanwe agbanwewo mgbe niile na ahịa post-COVID. Kama ịnwa ịbịaru oge n'ahịa ma na-atachi obi na ịchọta ịchọta ego ziri ezi, ndị nwe ụlọ nwere ike ịme otu ego iji kpochapụ isi ọwụwa ahịa. Ahịa akpaaka na-eme ka ọnụego kachasị mfe. Ndị na-achụ ego na ndị nwe ụlọ nwere ike itinye ego na teknụzụ nke ga-enyocha nyocha ahịa ma depụta ihe onwunwe ahụ na ọkwa ọnụahịa kwesịrị ekwesị ma nọrọ ogologo oge. Ọ nwere ike ịgbanwere nhọrọ ọ bụla, na-arịọ ọtụtụ ndị ọbịa nwere mkpa dị iche iche ruo oge ma ọ bụ mmefu ego. O nwekwara ike depụta otu ihe ahụ na saịtị mgbazinye obere oge, nke ọ bụla na-eweta ndị na-ege ntị dị iche.
Site na iji usoro azụmaahịa akpaghị aka arụ ọrụ, ọ dị mkpa na ndị nwe na ndị na-etinye ego na-anakọta data gbasara etu ndepụta ọ bụla si arụ. Portal nke onye nwe ya nwere ike ịbụ nnukwu ebe etiti ọnụọgụ dị mkpa, na-edekọ ego ha nwetara, na-edekọ akụkọ ihe mere eme, mmefu, na ịkwụ ụgwọ n'otu ebe. Ndị na-achụ ego nwere ike ịghọta ihe ịga nke ọma nke usoro azụmaahịa dị iche iche, ma soro ụdị ọnụahịa na ogologo ogologo oge na-adọta ọtụtụ ahịa ha. Ha nwere ike imezi ego ha, meziwanye usoro ha na-eme, wee debe akara ala ha ma n'otu oge ahụ na-achịkọta usoro dị mkpa: obibi, ego ọnwa, wdg.
Ndị na-achụ ego na ndị nwe ha na-efufu oge na ike ọgụgụ isi mgbe ha na-anwa itinye aka na minutia nke ndị nwe ụlọ. Nlekọta aka nke ịgbazinye oge dị mkpirikpi gbakwunye. Ndị nwe ha na-ejigharị ederede, nyocha ndị ọbịa na nyocha ID, ịkwụ ụgwọ, na ihicha n'etiti oge ọ bụla. Ngwa ngwa karịa onye nwe ya nwere ike ịhazi, ihe ndị ahụ njikwa na-aghọ ọrụ oge niile, na-ewepụ ha site na ebumnuche mmalite ha: ịtọ ntọala ego.
Ndị nwere ya nwere ike itinye ego ha otu oge na njikwa ihe onwunwe iji nyere ha aka ijikwa ịdị uchu ha na-enye ndị ọbịa ha ahụmịhe na-enweghị aka. Ngwakọta ngwa ngwa nwere ike inyere ndị ọbịa aka site na nyocha ID, ma nyefee igodo nnweta aka na-enweghị aka maka mma ha. Ndị nwe ya nwere ike ịkwalite mmekorita njikwa n'oge usoro ntụgharị, kwa. Ha nwere ike inyocha ihe ngwongwo ahụ na-akpaghị aka maka nhicha na ndozi, ha nwere ike wepụta ọrụ onyinye ndị a na-akpaghị aka nye ndị na-elekọta ụlọ na ndị ọkachamara na-arụzi ọrụ. Enwere ike ịhazi akụrụngwa na-agbanwe agbanwe dabere na mkpa ọ dị ugbu a, na-enye ndị nwe ohere ịnọ ebe ọ bụla n'ụwa mgbe mgbanwe a na-eme.
Akụ kacha mma na-arụ n'ọrịa na-efe efe bụ mgbanwe. Obere oge mgbazinye bụ ezigbo onye na-achụ ego nwere ike ịbịa. Ndị mmadụ na-agagharị mpaghara ọhụụ na ọnụ ala dị ala, na-eme njem maka mgbanwe mgbanwe dị oke mkpa, ma ọ bụ na-anwale mpaghara ọhụụ site na nnwere onwe ọhụrụ ha n'ọfịs. Ezubere mgbazinye oge dị mkpirikpi maka njem ahụ na-efe efe. Onye ọ bụla nke nwere ego mgbazinye — ime ụlọ nke ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ụlọ ezumike nke ọgbara ọhụrụ — na-enwe ohere dị egwu. Site na ire ere akpaaka, onyinye ndị ọbịa ahaziri iche, na atụmatụ maka njikwa ihe njikwa akụ, onye ọ bụla nwe ya ga-anọzi nke ọma isonye na ọsọ ọsọ ọla edo na-efe efe.
Tags: Airbnbbian cheskyCOVID-19nsogbu zuru ụwa ọnụotutuọrịaijikwa ihe onwunweahịa ịre ụlọala na ụlọ investemtnsmartphone ngwa